एक्कासि के भयो प्रचण्डकि पत्नि सिता दाहाल लाई … अस्पताल लगियो अवस्था गम्भीर अवस्था? मा हेर्नुहस - Mitho Khabar
June 14, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on एक्कासि के भयो प्रचण्डकि पत्नि सिता दाहाल लाई … अस्पताल लगियो अवस्था गम्भीर अवस्था? मा हेर्नुहस
प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतका अनुसार सीतालाई मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो । १५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम पाइएको र आज केही सुधार देखिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । यद्यपि अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज गर्ने भन्ने एकिन छैन ।गत पुसमा उनलाई भारतको नयाँदिल्लीमा उपचार गरी ल्याइएको थियो ।
हालै उनका छोरीहरुले सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरेको एउटा तस्वीरमा सीताको स्वास्थ्य थप बिग्रिदै गएको जस्तो देखिन्थ्यो ।पाकिस्तानीले फसायो नेपालि चेली लाई चेली रुदै रुदै भिडियो हेर्नुहोस पाकिस्तानी युवाले फसायो भन्दै एक नोपली चेली रुदै रुदै मिडियामा आए पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल भईरहेको छ भिडियो । विवाह एक सास्वत सत्य हो ।
विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन नपछुताउने कुरै भएन । योबीचमा विवाहलाई लिएर अनेक मान्यता रहँदै आएका छन् । सामान्यतया स्लिम केटीहरु आर्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ ।
अहिले एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ नुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छ् र हरेक समयमा साथ दिन्छन भन्नुको अर्नभिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहो
अ,स्ता”ए नेपाली राष्ट्रगान ‘सयौँ ,थुँगा फूलका हामी’का गायक,अजय थापा, मनमा अलिकति दया भए [R.I.P] लेख्नुहोस
June 26, 2021 mithokhabar
February 25, 2020 mithokhabar